स्वाभिमानी मान्छेले मात्र कृषि पेशा अंगाल्छ SULSULE:A Truly Nepali News Portal
शशि पौडेल, सञ्चालक लुम्बिनी एग्रो प्रोडक्ट्स एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.
धेरै ढुङ्गे पहाडै फोड्नुपर्ने भवसागरको कुनै कुरा छैन । दर्शन जान्नुपर्ने दर्शन पढ्नुपर्ने आवश्यक पनि छैन् । राज्यले सानो–सानो कुराबाट सुरु गरे हुन्छ । धान खेती गर्नेलाई धानको बीउ दिने, मकै खेती गर्नेलाई मकैको, माछा पाल्नेलाई माछाको, गाई पाल्नेलाई गाईको ब्रिड दिने जसले जस्तो प्रकारको खेती किसानी गरेको छ, त्यसैको बीउ अथवा ब्रिड दिए पुग्छ । नेपालमा नार्क छ, म त्यसलाई नर्क भन्छु । संसारमा सबैले रिसर्च गरिसके हामीलाई अहिले रिसर्च के जरुरी छ । करोडौं खर्च गरेर उनीहरुले गरेको रिसर्चलाई हामीले कपि पेष्ट गरे हुन्छ । हाम्रो माटो र वातावरणीय अनुकूलता हेरेर सहयोग गर्न भने जुनसुकै देशले गरिहाल्छन् । चीनले एक कठ्ठामा सात मुरी धान फल्ने बीउ बनायो । कोरियाले एउटै कुखुरा ४०/५० किलोको बनाइसक्यो । इजरायलले ४० लिटर दूध दिने गाईबाट उत्पादन सुरु ग-यो । उनीहरुको त्यो प्रविधि ल्याएर राज्यले दिनुप-यो । अनावश्यकको राज्यको व्ययभार थप्ने नार्क चाहिँदैन । कृषिमा मात्र नभएर समग्र देशको विकास मोडल विदेशी राष्ट्रहरुको अनुसार हुनुपर्छ । हामीकहाँ हुने सबै चिज संसारको कुनै पनि एउटै देशमा हुँदैन र संसारको सबै देशमा हुने कुरा हामीकहाँ हुन्छ । त्यस्तो देशमा नानाभाती कुरा गरिरहनुपर्ने अवस्था नै देखिँदैन । खुरुक्क किसानहरुलाई बीउ ल्याएर दिने किसानले काम गर्छ, ब्युरोक्रेसीका मान्छे र नेताले गफ गरेर बसे भइगायो नि !
गेटभित्र पस्नेबित्तिकै धेरैले के भन्नुहुन्छ भने यहाँ त धेरै अनुदान आएको होला । सुको पाएको छैन, मैले पनि आउँदैन नभनेर चाहिनेजति राज्यले दिन्छ । हल्काफुल्का आफैँ गर्छु भन्छु । तपाईं पनि नबुझी सुरु गरेर पत्याउँदा केही पनि नपाएपछि मसँग आएर कराउनुहुन्छ । तँ ठूलो मान्छे सिधै लिएको होलास् भन्नुहुन्छ । त्यसपछि विस्तृत रुपमा बताउँछु । काम आफ्नै हो, राज्यले गर भनेर जबर्जस्ती गराएको पनि हैन । मैले स्वेच्छाले गरेको कामलाई राज्यले दिएन भनेर गुनासो गर्दिन । काम सुरु गर्नेभन्दा पहिला राज्यले सकेसम्म मलाई असहयोग गर्छ, राज्यले दिने होइन लिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि म आफ्नो कामबाट पछि हट्दिन भन्ने आत्मविश्वासका साथ लागियो भने अवश्य पनि सफल हुन सकिन्छ । (आर्थिक दैनिकबाट)